December 21, 2017 August 14, 2018 Internet Khabar
जबकी अघिल्लो प्रश्नमै त्यसको समाधान छ। अर्थात मोटोपन बढ्ने कारणहरु खोतलेर त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नु नै मोटोपनबाट छुटकारा पाउने सरल उपाय हो ।
तर, नेपाली परिवेशमा मात्र होइन, विश्वकै लागि यो टाउको दुखाईको विषय हो । ग्लोबल न्युटि्रसनले भर्खरै सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले भन्छ, अघिल्लो बर्ष दक्षिण एसियामा मात्र करिब २४ प्रतिशत महिलामा मोटोपनको समस्या देखिएको छ । नेपालमा २२ प्रतिशत महिलालाई मोटोपनले गाँजेको छ ।
अब के गरौं ?
मोटोपन किन हुन्छ ? भन्ने समस्याको निराकरण खोज्ने हो भने यसबाट छुटकारा पाइन्छ ।
मोटोपन मुलत हाम्रो खराब जीवनशैलीको कारण हुन्छ । एकातिर निस्त्रिmय दिनचर्या, अर्कोतिर अस्वस्थ्यकर खानपान । फास्टफुड, चिल्लोचाप्लो, मसलेदार खानेकुराको सेवन अत्याधिक बढेको छ । त्यसअनुरुप शारीरिक सक्रियता घट्दै गएको छ ।
यहाँ सामान्य टिप्स दिइएको छ ।
– आइरनबाट भरपुर चिजहरु जस्तै स्याउ र मूला खाँदा शरीरमा ताकत प्राप्त हुन्छ । साथै केही समय घाममा बसेर बदाम खाएमा स्फूर्तिको महसुस गर्नेछन् ।
मिथुन राशी भएका ब्यक्तिको वर्ष २०१८ कस्तो होला ? थाहा पाउनुहोस् तपाईको भविष्य
August 21, 2017 July 21, 2018
December 21, 2017 September 24, 2018
यस्ता ब्यक्तीले लसुन खादा यस्तो असर गर्छ